Dowladda Turkiga oo Cambaraysay Qarixii Shalay ee Muqdisho – Radio Daljir
Dowladda Turkiga oo Cambaraysay Qarixii Shalay ee Muqdisho
Oktoobar 15, 2017 4:54 b 0
War-saxaafadeed ay soo saartay Safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayey dowladda Turkiga ku cambaareysay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee ay dadka badan ku dhinteen.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale tacsi loogu diray ehellada Dadka Soomaaliyeed ee ku dhintay weerarka shalay ka dhacay Isgoyska Zoobbe ee Magaalada Muqdisho.
Sidoo kale dowladda Turkiga waxaa ay sheegtay in ay garabtaagan tahay shacabka Soomaaliyee islamarkaana ay dowladda Soomaaliya ka caawineyso sidii looga adkaan lahaa waxa loogu yeero argagixisada.
War-saxaafadeedka ka soo baxay Safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in dolwadda Soomaaliya ay horumar fiican ka sameysay amniga iyo xasiloonida bilihii la soo dhaafay,islamarkaan horumar dhinac dowladnimada ah ay gaartay Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo ku Dhawaaqay Sadex Malmood oo Baroordiiq ah